Maalinta: Oktoobar 16, 2019
TCDD İzmir Port 22-23 Tirada Docks Inta udhaxaysa 127 Docks Docks iyo Backfill buuxinta Sida Natiijada Tender 2019 / 422911 GCC xadka qiimaha 46.303.769,24 / XNUMX TL iyo [More ...]
Diyaarinta Iskudhaca inta u dhaxaysa 392 + 742 - 395 + 700 Sida Natiijada Jamhuuriyadda Tender-ka ee Waddooyinka Tareenka Waddanka Turkiga. Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobolka (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 2 / 2019 GCC 470789 TL [More ...]
ISO 39001 Nidaamka Maareynta Amniga Wadooyinka Nidaamka Furitaanka Kormeerka Furitaanka Shirarka waxaa lagu qabtay kaqeybgalka Duqa Magaalada Mersin ee Magaalo Weynta Vahap Seçer, kaasoo doonayey in Dowlada Hoose ay sii waddo himilooyinkeeda safarka tayada leh. [More ...]
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktas, Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka Mimar Sinan Street howsha wadooyinka safarka dhaadheer ee socda ayaa lagu dhammeystirey gobolka, wuxuu sheegay in gaadiidku uu noqon doono mid debecsan. Bursa waa la heli karaa [More ...]
Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli iyo GaadiidkaPark A.Ş. waxay bixisaa adeegyo gaadiid dadweyne basaska 93 ee wadooyin kaladuwan oo ku baahsan Kocaeli. Iyadoo la waafajinayo shuruudaha muwaadiniinta degen degmooyinka [More ...]
Midowga Degmooyinka Marmara iyo Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu baaray tababbarka baska simulator oo la siiyay ku dhawaad ​​laba kun iyo shan boqol oo degmo iyo darawalada GaadiidkaPark tan iyo 2013. [More ...]
Dadka ka soo horjeedaa mashruuca xadhka-goosiga ee lagu soo uruuriyey aagagga shaqooyinka dhismaha laga bilaabi doono maanta, Kırkpınarlılar, oo doonaya in wax laga beddelo mashruuca xadhigga ee Dawladda Hoose ee Sapanca oo shaqada ku jiray ku dhawaad ​​bilo ah 2, ayaa bilaaban doona maanta. [More ...]
Laga soo bilaabo Fethi Yaşar ilaa Demetevler. Duqa Yenimahalle Fethi Yaşar wuxuu martigaliyay Zafer Yıldırım, Madaxa Laanta Ankara ee TÜGİAD iyo Golaha Agaasimayaasha. Macluumaadka ku saabsan shaqada degmada Yenimahalle iyo horumarka degmada [More ...]